About Us | 4TV
4TV ၏ သမိုင်းကြောင်း
4TV သည် Forever Group Co., Ltd ၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းများစွာကို ထုတ်လွှင့်ပြသနေသည့် အခပေးရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ 4TV သည် ဖျော်ဖြေရေး၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ လူနေမှုပုံစံ၊ အားကစားကဏ္ဍများမှ အထွေထွေဗဟုသုတကဏ္ဍများ အထိ ပါဝင်သောရုပ်သံလိုင်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကို စဉ်ဆက်မပြတ် တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။ထို့ပြင်ပရိသတ်အနှစ်သက်ဆုံးရုပ်သံလိုင်းများကိုရုပ်သံအရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သော HD(High Definition) နည်းစနစ်ဖြင့်အသုံးပြုထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Forever Group Co., Ltd နှင့် Family Entertainment Group Co., Ltd တို့ ပူးပေါင်းကာ “5 Network” ဟုအမည်ရသော မြန်မာပြည်၏ ပထမဦးဆုံး အခပေးရုပ်သံလိုင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို မိသားစုများအတွက် ရည်ရွယ်ကာစတင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် Forever Group Co., Ltd သည် နိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်း ၁၄ လိုင်းအား ထပ်မံတိုးချဲ့၍ မြန်မာပြည်တွင်း စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် 4TV သည် ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်သော အစီအစဉ်များပါဝင်သည့် For Info , For Edu , For Tunes , For Sports , For Drama , For Cinema , For Comedy ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်သံလိုင်းသစ်များကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလတွင် 4TV သည် မိမိပရိတ်သတ်များအတွက် ၀န်ဆောင်မှုကို မြှင့်တင် သည့်အနေဖြင့် ရုပ်သံအရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်သော HD (High Definition) ဖမ်းယူစက်များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ၄င်းစက်ဖြင့်ဖမ်းယူကြည့်ရှုရန် HD အရည်အသွေးရှိ ရုပ်သံလိုင်းများကိုလည်း ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် မိမိကုမ္ပဏီ မှထုတ်လုပ်သည့် ရုပ်ရှင်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များပါဝင်သော 4HD ရုပ်သံလိုင်းသစ်ကိုလည်း HD အရည်အသွေးဖြင့် စတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ပရိသတ်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် 4TV ၏ ပြည်တွင်း နှင့်နိုင်ငံတကာရုပ်သံလိုင်းများကို နေပြည်တော်အထိ တိုးချဲ့ထုတ်လွှင့် ပေးခဲ့သည်။.
4TV ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Forever Group Co.,Ltd. သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ၌ မိမိ၏ အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဖြစ်သည့် MRTV-4 နှင့် Channel7အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းနှစ်ခုကို HD အရည်အသွေးရှိ MRTV-4HD နှင့် Channel 7HD အဖြစ် အဆင့်မြှင့်၍ 4TV အတွက် သီးသန့် တင်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် 4TV သည် မိမိကိုယ်ပိုင်ရုပ်သံလိုင်းသစ်ဖြစ်သည့် "For Ladies HD" ရုပ်သံလိုင်းကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဤရုပ်သံလိုင်းတွင်အလှပြုပြင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ ဖက်ရှင်ကဏ္ဍနှင့် မြန်မာစာတန်းထိုး ကိုရီးယားဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲများအပါအ၀င် ကိုရီးယားအစီအစဉ်များကို မြန်မာအမျိုးသမီးထုအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပြသပေးသည်။ ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီ တွင် 4TV ရုပ်သံလိုင်းများအား မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် DTH(Direct-to-Home) စနစ်ဖြင့် ထပ်မံထုတ်လွှင့်ကာ Satellite Receiver များ ရောင်းချခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် 4TV HD Receiver များအား လွယ်ကူစွာ ၀ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် အမြို့မြို့အနယ်နယ်တွင် 4TV အရောင်းပြခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ CB Bank, AYA Bank နှင့် MAB BankMobile Banking များ၊ 1STOP ရှိသောဆိုင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးသက်တမ်းတိုးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 4TV HD Receiver များကို Ocean Supermarket နှင့် City mart ဆိုင်ခွဲများတွင် ၀ယ်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။